Fahamaizan’ny CNRIT sy CNRE Fiadanana: fitaovana sy voka-pikarohana maro potika sy levon’ny afo | NewsMada
Fahamaizan’ny CNRIT sy CNRE Fiadanana: fitaovana sy voka-pikarohana maro potika sy levon’ny afo
Nijoalajoala ny afo omaly vao maraina tamin’ny 3 ora nandritra ny firehetan’ny trano lehibe roa iombonan’ny foibem-pikarohana dia ny ivontoeram-pikarohana momba ny indostria sy ny teknolojia (CNRIT) sy ny ivontoeram-pikarohana momba ny tontolo iainana (CNRE)
Tapitra kila hotohoton’ny afo avokoa ny entana rehetra tao amin’ireo trano lehibe ireo. Isan’izany ny trano famakiam-boky, laboratoara roa, birao telo fiasan’ireo mpiasa, trano fitehirizana ireo antontan-kevitra ary voka-pikarohana fampiasan’ireo mpianatra manao fikarohana, niampy ireo fitaovana fanaovan’ny mpianatra fikarohana. Araka ny fanazavan’ny talen’ny CNRIT, Randrianirainy Charles, niainga avy any amin’ny valin-drihana ny afo izay tsy fantatra mazava fa ny afo efa nirehitra no hitan’ny mpiambina. Fotoana fohy taorian’ny firehetana, tonga ara-potoana ihany ny mpamonjy voina saingy nanano sarotra ny famonoana ny afo noho ny fisian’ireo karazana akora simika fampiasan’ny mpianatra rehefa manao fikarohana. Nitondra fanazavana ihany koa ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, misy zavatra mampiahiahy ihany amin’izao firehetana tampoka izao ka nampiantso ny eo anivon’ny polisy siantifika ny minisitera mba hanao fanadihadiana lalina momba ity raharaha ity. “Efa tonga nanao fanadihadiana tety (tao amin’ny CNRE sy CNRIT io) ny polisy misahana ny heloka bevava sy ny polisy siantifika ka andrasana ny valin’ny fanadihadiana nataon’izy ireo”, hoy hatrany izy.
Toeram-pikarohana mampidi-bola be indrindra…
Na teo aza ny fisian’ireo akora samihafa nampanano sarotra ny famonoana ny afo, nanao izay ho afany ihany ny mpamonjy voina tamin’ny fifehezana ny afo ka vetivety ihany dia maty ny afo. Nomarihin’ny teo anivon’ny sampana mpamonjy voina fa fipoahana herinaratra no nahatonga ny firehetana tao amin’ity foibem-pikarohana ity ka niitatra tamin’ireo efitrano hafa. Marihina moa fa niteraka alahelo ho an’ireo olona mahafantatra tsara ity foibem-pikarohana ity izao fahamaizana izao. Fantatra fa ny CNRE sy ny CNRIT no hany toeram-pikarohana mampidi-bola be indrindra ho an’ny fanjakana indrindra ho an’ny minisiteran’ny fampianarana ambony noho izy ireo manana laboratoara fanaovana fitiliana na amin’ny vokatra ara-tsakafo izany na amin’ireo vokatra eo amin’ny sehatry ny tontolon’ny fitsaboana sy ny fanafody.